Maninona no tsy mahomby ny paikadim-barotra any ivelany | Martech Zone
Maninona no tsy mahomby ny paikadim-barotra ivelany
Alatsinainy Martsa 11, 2013 Alatsinainy Martsa 11, 2013 Douglas Karr
Misy fakam-panahy avy amintsika ao amin'ny indostrian'ny varotra miditra hampihena ny varotra ivelany. Novakiako mihitsy aza izay nolazain'ny mpivarotra inbound sasany fa tsy ilaina intsony ny marketing ivelany. Raha ny marina, bunk izany. Torohevitra mahatsiravina ho an'ny orinasa mitady hanitatra tsena vaovao ary hifandray amin'ny vinavinany izay fantatr'izy ireo fa hahatonga mpanjifa tsara.
Raha manana marika fanta-daza ianao (toy ny fanaon'ny bilaogera sy masoivohon'ny media sosialy maro), mety tsy ilaina ny maka telefaona sy miantso mangatsiaka. Ny vava sy ny fanondroana dia mety ampy hanampiana anao hampivoatra ny asanao. Tsy rendrarendra ananan'ny orinasa be loatra anefa izany. Raha te hitombo sy handresy ny fiangarana, ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy maintsy mampiditra tetika marketing ivelany. Na eo aza izany dia maro ireo lazaina fa matihanina amin'ny varotra izay manome torohevitra fifandraisana tsy ampoizina miaraka amina prospect alohan'ny handaozany azy ireo.
Ny ankamaroan'ny paikady marketing ivelany dia tsy mahomby satria tsy maharitra amin'ny fiantsoana ireo mpanjifa izay ao anatin'ny rakipeon'izy ireo. Niady hevitra momba izany izahay Bill Johnson - mpiara-manorina an'i Jesubi, a varotra fitaovana mandeha ho azy varotra ary mpanohana an'i Martech.
Ny herin'ny fikirizanana
Ny ampahany amin'ny antony nahatonga an'i Bill ho mpino lehibe ny fikirizan'ny matihanina ary ny antony nananganany an'i Jesubi dia niverina tamin'ny andro voalohany tany Aprimo. Tapa-kevitra ny hiantso ny mpivarotra hatramin'ny 12 heny mandritra ny 10 ka hatramin'ny 12 herinandro manandrana mampiditra azy ireo amin'ny telefaona handroaka resaka. Satria i Aprimo dia nikendry ireo ekipa marketing Fortune 500 izay nanana olona marobe lasibatra.
Sarotra be ihany koa ny nahazo ireo vinavin-daharana haka ilay telefaona na hamerina mailaka. Merrill lynch dia tao amin'ny lisitra kendrena nananan'izy ireo Anarana marketing 21 kendrena… manomboka amin'ny CMO, mankany amin'ny VP an'ny Marketing hatramin'ny talen'ny Marketing Internet, sns Talen'ny Marketing tsy miankina amin'ny mpanjifa tsy miankina farany namaly ny findainy tamin'ny andrana faha-9. Izy no olona 18 kendrena. Nanaiky tolotra hivory izy, nivadika ho fanantenana matanjaka ary nitondra fifanekena an-tapitrisany dolara. Raha najanon'izy ireo ny antso taorian'ny andrana 6 na niantso olona 4 fotsiny dia tsy ho tafaresaka taminy mihitsy isika.
Vao tsy ela akory izay dia nanakatona fifanarahana tamin'i Jesubi Xerox. Ny repoblikan'i Bill dia niantso VP an'ny Sales 10 heny tao anatin'ny fe-potoana 7 herinandro. Tena nanantona azy izy tamin'ny andrana faha-2 :). Nanohy niantso izy ary tamin'ny andrana faha-10 nataony dia nilaza izy fa tsy izaho no olona mety azafady miantso ny SVP of Sales. Niantso azy ny solontenako ary tamin'ny fanandramana faha-8 dia naka ny telefaoniny izy nanao hoe: "Lehilahy mafy hatoka aho mba hahafahanao manao ahoana no nanaovanao azy?" Nanazava ny fizotrany sy ny fomba nanampiany i Jesubi. Xerox dia nangataka demo tany an-toerana ary herinandro vitsivitsy taty aoriana dia nanao fifanarahana mpampiasa 50 i Jesubi.
Na ny iray amin'ireo ohatra etsy ambony ireo dia tsy nikatona tamin'ny alàlan'ny varotra anatiny satria tsy nitady ny vahaolana ny vinavina. Samy tsy nisy hamaly ny mailaka. Samy tsy nisy nanao raharaham-barotra tamin'ireo orinasam-panjakana tsirairay avy raha tsy nantsoina afa-tsy in-6 na tamin'ny fifandraisana 4 ny reps. Ny hery dia ny fahafantarana fa mila fikirizana ary mahafantatra hoe inona izany fikirizana izany.
Jesubi manatsara ny famokarana varotra amin'ny tatitra mahaliana sy ny fanaraha-maso ny resaka azo atao. Mitsitsia fotoana sy mivarotra bebe kokoa amin'ny efijery fiantsoana iray-tsindry, fanaraha-maso mandeha ho azy ary fitaovana fanaovana tatitra matanjaka.
Tags: Calling coldCRMjesubimerrill lynchmarketing varotravarotra mandeha ho azyvarotra crmvarotra prospectingvarotra mandeha ho azy varotraxerox
TimeTrade: Avelao ny fandaharana hitarika ny fanendrena anao manaraka!
Ny fanjakan'ny doka ara-tsosialy
Mar 12, 2013 amin'ny 9: 54 AM
Misaotra hatrany Doug, ny feo voalohany dia toa vahaolana automatique momba ny varotra mendrika ny hahitana azy bebe kokoa, ary ny faharoa dia niteraka resadresaka tsara momba ny fanombohana sy ny vondrom-piarahamonina misy anao ny hafatrao.
Mar 12, 2013 amin'ny 10: 22 AM
Misy teboka ny fihenan'ny fiverenana. Miaraka amin'ireo mpanjifa B2B miara-miasa aminay dia hitanay fa taorian'ny fanandramana 8 ny antso an-tariby sy ny mailaka dia nihena be ny tahan'ny fiverenana na ny fifamatorana. Ny fikirizana dia tsara sy tsara mandra-pahatongan'ny fanaintainana manelingelina amin'ny boriky, izay manimba ny fahatsapana ny orinasa sy ny marika. Mazava ho azy fa misy ny maningana izay hisian'ny "mpanazatra" mpivarotra eny an-tsehatra ary hiresaka ny momba ny mpivarotra ao anatiny izay nanao andrana 87 ary nampivelatra ny varotra tamin'ny fiainany. Izay no maningana. Raha misy miantso ahy in-12 nefa mbola tsy namaly aho dia efa vonona ny handefa balafomanga nokleary amin'ny orinasan-dry zareo. Zava-dehibe ny fahalalana hoe rahoviana no hiala ary mametraka ny fifandraisana amin'ny programa fikolokoloana.
Mar 30, 2013 ao amin'ny 5: PM PM
Voalohany, tiako ny miresaka an-telefaona. Nahoana? Matetika aho no manao azy io, ary izany dia amin'ny endriny. Raha miresaka amin'olona aho dia mividy na mivarotra zavatra matetika aho. Mety hahazo antso roa ambinifolo isam-bolana tiako ho raisina aho - ny 2 ka hatramin'ny 3 hetsy (nandinika ny rafitry ny VOIP teo aloha aho) dia BS izay ataoko tsinontsinona. Toa fanantenan'ny varotra mandeha ho azy fa hampitombo izany isa izany. Aleo lazaina mazava - tsy hitondra soa ho an'ny chap amin'ny faran'ny tsipika izany. Nahoana? Satria tsy mino aho fa hisy hiantso ahy amin'ny vahaolana mbola tsy nojereko - ary raha nitana lanja io dia efa nanatona azy ireo aho. Ity fomba fiasa mihidy sy feno fahatokisana ity no mahatonga ny sasany amin'ireo toetran'ny mpividy ahy - Mpampiasa voalohany aho izay mividy lanja ary aleony fantsona nomerika - eny fa na dia ny fiaraha-monina aza - mba hikaroka sy hanangana ny vahaolana napetraka izay mitarika ny orinasako .
Noho izany, ny teboka eto dia hoe na impiry na impiry na firy no iantsoana ahy ny rafitra rehetra, tsy io no fantsom-pitiavako azy - ary mazava ho azy fa tsy mandeha izany, efa nanandrana ny olona. Tsy midika izany fa tsy hiasa ho an'ny hafa izy io, raha asehon'ireo ohatra etsy ambony ireo fa hanao izany - na izany aza dia mieritreritra aho fa izany koa dia mampiseho fa ny fampihetseham-batana persona mpividy dia lozisialy tena mampiavaka ny fizarazaran-drano izay azon'ny mpivarotra rehetra tombony. Ny fikorotanana iray dia tsy mety amin'ny olona rehetra - ary tsy miankina amin'ny lohatenin'ny asa, na ny haben'ny orinasa na koa amin'ny fividianana andraikitra - miankina amin'ny toetra izany. Na ny vahaolana dia automatique marketing, na automatisation des prospectes des varotra dia tsy misy mahasolo ny fahalalana hoe iza no iresahanao. Ary raha vantany vao azonao an-telefaona izy ireo, dia vao mainka hanankarena azy io ny resaka.